एक सेवाको रूपमा कार्य प्रबन्धन सफ्टवेयर
बुधबार, जुन 30, 2010 बुधबार, जुन 30, 2010 Douglas Karr
यी विगतका दुई हप्ताहरू, म जारी राख्न संघर्ष गर्दैछु। मसँग कम्तिमा एक दर्जन परियोजनाहरू छन्, कम्तिमा partner साझेदार कम्पनीहरू, पूर्ण-समय कर्मचारी र २ अंशकालिक संसाधनहरू। म बिक्रीमा जारी राख्न कोशिस गर्दैछु साथै मैले बिक्री गरेको परियोजनाहरू पनि पूरा गर्दैछु। हामी त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं जहाँ हामीले अर्को पूर्ण-समय कर्मचारीका लागि पर्याप्त व्यवसाय पाएका छौं ... तर हामीसँग त्यस्तो स्रोत छैन (ऊ दुई हप्तामा सुरु हुन्छ!)।
व्यवस्थित गर्न, मैले खरीद गरें कुरा केही महिना अघि यो म्याकको लागि एक धेरै साधारण कार्य प्रबन्धन अनुप्रयोग थियो जुन मेरो क्यालेन्डरमा एकीकृत थियो। यो अचम्मको सफ्टवेयर हो र यसले मलाई ब्याकलोग उत्पन्न गर्न र मेरो कार्यलाई प्राथमिकता दिन जारी राख्न मद्दत गर्‍यो।
समस्या, यद्यपि यो केवल यसको लागि राम्रो हो my काम मेरा धेरै कार्यहरू सहयोगी छन् र बहु ​​टीमहरूका सदस्यहरूलाई एकल प्रोजेक्टमा धेरै कार्यहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। मलाई परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर चाहिएको थिएन - त्यो ओभरकिल हुने थियो। मलाई भर्खर एउटा साधारण अनुप्रयोग चाहिएको थियो जहाँ असाइनमेन्टहरू गर्न सकिन्छ, सबै कार्यहरू ट्र्याक गर्न सक्दछन्, र सम्पन्न भएको काम संग्रहीत गर्न सकिन्छ।
यसले केहि समय लिए, तर मैले सेवा समाधानको रूपमा एक उत्तम सफ्टवेयर फेला पारे, नमस्कार.
नमस्कार मलाई वर्गीकृत गर्न, प्राथमिकता, मिति, परियोजना, वा मालिक द्वारा कार्यहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। म प्रत्येक कार्यलाई ट्याग गर्न सक्दछु र तत्काल कार्य सूची पनि फिल्टर गर्न सक्दछु। सबै भन्दा राम्रो, व्यापार खाता प्रति महिना मात्र १$ डलर हो र तपाइँलाई एक ब्रान्डेड सबडोमेन, तपाइँको लोगो, २ 15 घण्टा समर्थन र तपाइँका कार्यहरू र परियोजनाहरू साझा गर्न सक्ने क्षमता प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
मेरो मात्र हायटास्कको लागि इच्छा छ? एक Droid अनुप्रयोग (तिनीहरूसँग पहिले नै आईफोन अनुप्रयोग छ)। एक महिनाa१$ को लागि, यद्यपि यो प्रणालीको एक हेक हो!
टैग: विज्ञापन इञ्जिनसम्मेलन नेटवर्कप्रदान गर्नुडिलिभ्राईमेल रणनीतिहरुसम्मेलन खोज्नुहोस्माइस्पेससामाजिक रिपोर्टिंगzoominfo डाटा सेवाहरू
तपाईको साइट पदानुक्रम वास्तवमै कस्तो देखिन्छ
जुलाई,, २०१ at 1::2010। बिहान
मैले अनुसरण गरेका प्रत्येक विश्वस्त सल्लाहकारले सबै उस्तै चिल्लाएका छन् ... ”तपाईले १००% निश्चित नगर्नुभएको कुनै पनि कुराको लागि अनलाइन पैसा खर्च नगर्नुहोस् तपाईले तपाईको ई - वाणिज्य कार्यमा तुरून्त प्रयोग गर्नुहुनेछ!
यसमा तपाईको हेड-अपको लागि फेरि सराहनीय, डग। मैले भर्खरै साइन अप गरेको छु! 😛
HiTask मा सुन्दर वेब डिजाइन। मैले भर्खरै मेरो आफ्नै कार्य / प्रोजेक्ट ब्यवस्थापन उपकरणहरूको पुन: मूल्या and्कन गरें र एक स्प्रेडशीटबाट (प्रोजेक्टहरूको लागि) + याद राख्नुहोस्मिलक (कार्यहरूको लागि) मोयनमुन (http://www.manymoon.com).
मैनमून मूल रूपमा निःशुल्क (असीमित परियोजनाहरू) नि: शुल्क हुन्छ र गुगल अनुप्रयोगहरूसँग बाकसको ठीक बाहिर एकीकृत गर्दछ। आशा छ कि यसले मलाई ट्र्याकमा राख्नेछ।
जबकि इन्टरफेस धेरै लामो दूरीमा आयो, म अझै पनि मेरो आरटीएम हटकीहरू सम्झन्छु र रिपोर्टि need गर्न आवश्यक पर्दछ, तर यी चीजहरू हुन् जुन म ग्रेसेमन्की स्क्रिप्टहरू लेख्न सक्दछु। 😛
अप्रिल 16, 2012 मा 9: 23 एएम
मैले हिटास्कका साथ शुरू गरें र उनीहरू बिस्तारै म कमिन्डवेयर टास्क म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सरे जुन धेरै राम्रो संगठित छ र यसले तपाईको लागि अझ बढी समय बचत गर्छ किनकि तपाईले टोलीमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य टोलीका सदस्यहरूले कसरी काम गर्ने छन् र उनीहरूले कसरी म्याद सकिन्छ भनेर हेर्नुहोस्। र यस बाहेक तपाईं कागजातहरू प्रणालीमा संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ र आउटलुकका साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ।